Cunista Yaanyada Oo Kordhiso Kacsiga Warhoow Ha La’iska Yareeyo Dalc Bilaashka | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Sunday, May 26th, 2013	Home
Cunista Yaanyada Oo Kordhiso Kacsiga Warhoow Ha La’iska Yareeyo Dalc Bilaashka
Published on February 11, 2013 by admin · No Comments
Number of View :11014Qubarada Jaamada Boston University ee dalka America ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay in ay Tomato ama Yaanyada ay ka qeyb qaadato kacsiga gaar ahaan dhanka Dumarka.
Inkastoo dumarka ay aad u isticmaalaan Yaanyada hada ma ogo sirta dhabta ah ee ku jirta waxaana cilmi baaristaasi lagu sheegay in haweenka isticmaala yaannyada ay ka kacsi badan yihiin kuwa kale ee aanan isticmaalin waana sababta keenta in xitaa haweenka aadka u isticmaala ay ka raaxa badanyihiin kuwa kale.
Raaxada Sariirta oo ah mida ugu qiimaha badan raaxo nolol uu arko ayaa ah mid labadan dhinac ay u maraan wado walba oo lagu kordhin karo qiimaheeda ayadoona shirkadaha aduunka ay isku dagaalaan in ay soo saaraan sheyba sheyga uu qurux badanyahay si loogu isticmaalo aqalka.
Tomato ama Yaanyada ayaa la sheegayaa in ay ku jirto maado kicisa dareenka xiliyada badan ayadoona sida aan wada ognahay haweenka Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan xili kasta.
DALAC-BILAASHA waxa uu ka mid yahay inta badan wax ay ka wada simanyihin dumarka Soomaalida cunistiisa ayadoona 90% ay tahay tomato-da waana mida keenta in hablaha Soomaalida xiliyada qaar ay ka dareen iyo kacsi badanyihin kuwa kale ee caalamka marka laga reebo kuwa aanan isticmaalin Dalacbilaashka.
Cilmi baaristaan ayaa noqoneyso tiro daraasad oo ay sameysay Jaamacada waxaana haatan lagu ogaaday dalalka aadka loogu isticmaalka badanyahay Italy, Pakistan, America, Somalia ayadoona dalalkaasi ay yihiin kuwa liiska koobaad uga jira isticmaalka tomato-da ama Yaanyada.